isivumelwano: ivuliwe i-samsung ye-galaxy s7 emaphethelweni kwintengiso ye- $ 475 nje kwi-ebay
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: Kuvulwe umda we-Samsung Galaxy S7 kwintengiso nge $ 475 nje kwi-eBay
Ngoku ukuba i-Samsung yenze iiflegi zayo ezintsha, i-Galaxy S8 kunye ne-S8 + ziyafumaneka kwintengiso, ekugqibeleni sinokuba nezivumelwano ezinentsingiselo kwiimodeli zangaphambili, i-Galaxy S7 kunye ne-Galaxy S7.
Njengokunyuselwa okwangoku okuqhubayo kwi-eBay, ebonelela nge-Samsung Galaxy S7 Edge nge $ 475 nje ngqo. Umda weGPS S7 uyafumaneka ukuze uthengwe eUnited States nge $ 600, kodwa wena & ampos; uza kugcina i-125 yeedola ukuba uyifumana kwi-eBay.
Gcina ukhumbula nangona umthengisi we-eBay ethengisa i-Duos ye-Samsung Galaxy S7 engavulwanga, eya kusebenza kuphela Iibhanti ze-AT & T kunye neT-Mobile . Kwaye kufanelekile ukuba uqaphele ukuba uya kukwazi ukukhetha kwimibala emnyama okanye yegolide.
Ngapha koko, imodeli ye-Galaxy S7 yomda weDuos ngokuxhomekeke kule ntengiso iipakethe ezingama-32GB zememori yangaphakathi, kodwa unokukhetha okwahluka okungu-128GB ukuba awunakucinga ngexabiso eliphezulu kakhulu ($ 580).
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, iinqanawa ze-smartphone e-United States kuphela kwaye ziya kufikelela kuwe ngeentsuku ezi-4, njengoko umthengisi ekhankanya kwi-eBay.
imvelaphi: eBay ( Imodeli ye32GB , Imodeli ye-128GB )
flir enye vs funa xr
UGoogle Chrome we-Android ufumana iqhosha lasekhaya kwakhona
I-Apple Watch Series 6 vs Series 5: Uyintoni umahluko
I-Apple ikhupha i-iOS kunye ne-iPadOS 13.6 ngeCarKey, ukulungiswa kwe-bug kunye nokunye
Izicelo zeWebhu zokuSebenzisa iiWebhu